Egypta: Mpanefoefo Voarohirohy Ho Namono Vehivavy Mpihira Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2017 6:51 GMT
Nosamborina noho ny famonoana ny vehivavy mpihira Libaney iray monina ao Dubai ny lehilahy mpandraharahana mpanefoefo Egyptiana iray. Ireto ny fanehoan-kevitr'ireo bilaogera Egyptiana momba ity raharaha ity.
Nanambara ny vaovao vao mafana i Zeinobia tao amin'ny bilaogy Egyptian Chronicles. Hoy izy nanoratra :
Nahazo vaovao tsy tena ofisialy tamin'ny alàlan'ny Twitter aho androany, niampanga tamin'ny fomba ofisialy an'i Hisham Talaat Mustafa tamin'ny fanomezana baiko hamonoana an'i Suzan Tamim ny mpampanoa lalàna.
Nohamafisin'ny tranonkala BBC amin'ny teny Arabo ny vaovao, izany eo ihany, tsy androany no andro fiampangana fa fisamborana an'i Hisham Talaat Mustafa. Ity ny lahatsoratr'i Masrawy.com. ” Nosamborina androany tao Kairo i Hisham Talaat Mustafa. Nivory avy hatrany ny filankevi-pitantanan'ny orinasany, na ny fanjakan'ny rainy, ny vondrona TMG (Talaat Mustafa Group) ary ny rahalahiny Tarek no voatendry hisolo ny toerany ho Filoha Tale Jeneraly vonjimaika.
Tsy nivoatra ny sandam-petrabolan'ny TMG teo amin'ny tsenambola Egyptiana, taorian'ity vaovao nahavariana ity, nitotongana 16% ny sandan'ny petrabola, ary mino aho fa vao mainka hitotongana izany rahampitso satria tsy mbola nambara tamin'ny fomba ofisialy androany araka ny efa voalaza ny vaovao.
Namoaka rohy mankany amin'ny tantaram-piainan'ilay lehilahy mpandraharahana i Zeinobia ato.
Nizara vaovao hafa i Elijah Zarwan tao amin'ny bilaogy The Skeptic :
Nosamborin'ny polisy omaly ilay mpanefoefo egyptiana Hisham Talaat Mustafa, Filoha Tale Jeneraly teo aloha tao amin'ny iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra mpanao asavaventy ao Egypta sady solombavambahoakan'ny antoko eo amin'ny fitondrana. Voampanga ho nandoa vola roa tapitrisa dolara izy mba hamonoana ilay tovovavy mpihira Suzanne Tamim tao Dubai. Voarara ny fanehoan-kevitra momba ny fifandraisan'i Mustafa tamin'ity famonoan'olona ity tao amin'ny fampitam-baovao, mety hiaro an'i Mustafa ny governemanta, izay toa manana fifandraisana tsara amin'ny zanakalahin'ny Filoha, Gamal. Kanefa toa tsy marina loatra izany.
Namoaka ny fanavaozam-baovao momba ny fiantraikan'ity vaovao ity teo amin'ny tsena Egyptiana i Aziz al-Kaissouni avy ao amin'ny Reuters. Ary nitatitra ny lafiny ara-politika tao amin'ny lahatsoratra ho an'ny Financial Times i Heba Saleh .
Ary koa satria miresaka zavamisin'ireo mpanao ratsy ao amin'ny fiarahamonina mahitahita isika dia manana ampaham-baovao hafa i Zeinobia :
Voampanga ho manao kolikoly i Mohamed Farid Khamis, mpanjakan'ny karipetra tatsinanana, mpikambana ao amin'ny antoko NDP sy ny Vaomiera Shura !!
Toa nanome kolikoly mpitsara ity lehilahy mpandraharahana zokiolona ity. Avy eo, tsy afa-bela izy teto tamin'ny alàlan'ireo mpanelanelana izay niteny teo anoloan'ny mpampanoa lalàna.
Tsy mahalala na inona na inona mikasika izany ianareo satria, araka ny mahazatra, dia voararan'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ny famoaham-baovao . Aza adinoina lehilahy mpandraharahana matanjaka dia matanjaka i Khamis.
Namoaka vaovao misimisy kokoa momba ilay vehivavy mpihira novonoina, Suzan Tamim, ilay bilaogera avy ao amin'ny Teach the Masses, ao Koety.
Nisamboaravoara ny lasan'i Suzana Tamim, nanambady indroa izy ary efa noahiahiana ho nanome baiko ny famonoana ny vadiny faharoa. Nisakaiza tamin'i Mustafa izy (“tompon'ny” tanàndehiben'i Sharm Al Sheikh ny fianakaviany) saingy nisaraka izy ireo telo volana lasa izay. Nandositra nankany Londres izy talohan'ny nandehanany tao Dubai. Indrisy anefa fa nahita azy tao Dubai ilay olontiany voafitaka, Mustafa, ary nanome vola 2 tapitrisa dolara ny polisy iray mba hamonoana azy. Ary nataony izany tamin'ny fanapahana ny tendany .